Fanaovana diamondra diamonda fampiasa amin'ny RF fanamoriana fitaovana fampakaran-dàlana RF
Home / Applications / Induction Brazing / Fitaovana diamondra mifangaro vy miaraka amin'ny fampidirana
Famolavolana diamondra amin'ny induction
Sokajy: Induction Brazing Tags: misintona diamondra, fitaovana fanaovana diamondra, fanamboarana fitaovam-bidy diamondra, Fitaovana fandotoana diamondra, avo frezy brazing diamondra, diamondra fanosorana diamondra
Fitaovam-pitadiavana diamondra miaraka amin'ny fampidirana fitaovana fampidiran-dra
Induction Brazing no fomba azo antoka indrindra amin'ny fampidirana diamondra amin'ny metaly. Izy io koa no be mpampiasa indrindra ary iray amin'ireo faritra itazonana ny fizotrany ho tsiambaratelon'ny varotra amin'ny ankamaroan'ny orinasa. Ity taratasy ity dia manandrana manome topimaso ankapobeny momba ny diamondra famonoana, ary topimaso ireo fitaovana vao novolavolaina ampiasaina amin'ny famonoana ireo singa.
Induction Brazing dia fomba fampiraisana singa roa amin'ny alàlan'ny vy fanenitra fanenony, alim-pito. Ny faritra iraisana dia hafanaina ambonin'ilay teboka mandronanan'ny firaka, fa ambanin'ilay teboka mitsonika ireo fitaovana ampiarahina; ny firaka vy vita amin'ny vy dia mikoriana mankamin'ny elanelana misy amin'ireo fitaovana roa hafa amin'ny alàlan'ny hetsika capillary ary mamorona fatorana matanjaka rehefa mangatsiaka izy. Matetika rehefa manatevin-daharana ny metaly dia misy famafazana famafazana eo anelanelan'ny metaly roa hanatevin-daharana sy ny firaka.
Amin'ireo fomba rehetra azo anaovana metaly,induction brazing mety ho ny be mpampiasa indrindra. Ny tonon-taolana misy kofehy dia manana tanjaka mahery - matetika izy ireo dia mahery noho ny metaly roa mifamatotra. Induction Brazed joints koa mandroaka gazy sy ranoka, mahazaka ny hovitrovitra sy ny hatairana ary tsy misy fiatraikany amin'ny fiovan'ny mari-pana mahazatra. Satria tsy mihalevona ny metaly atambatra, tsy miolakolaka na manolana azy ireo izy ireo ary mitazona ny toetra metallurgical tany am-boalohany.
Ny fizotrany dia mifanaraka tsara amin'ny fidirana amin'ny metaly tsy mitovy, izay manome safidy lehibe ho an'ny mpamorona fivoriambe. Ny fivoriambe sarotra dia azo amboarina tsindraindray amin'ny alàlan'ny fampiasana metaly mpanenjana miaraka amin'ny teboka miempo mihena tsikelikely. Ho fanampin'izany, ny alika matevina dia azo safidiana hanonerana ny fahasamihafana eo amin'ny coefficient fanitarana hafanana eo anelanelan'ny fitaovana roa. Ny Brazing dia somary haingana sy ara-toekarena, mitaky mari-pana somary ambany ary azo ovaina amin'ny fandraisana andraikitra automatique sy mahia.
Induction Brazing ny diamondra mankany amin'ny substrate metaly dia samy hafa be amin'ny brazing hiditra amin'ny metaly. Raha tokony hiantehitra amin'ny hetsika capillary sy ny fatorana famafazana, ny famonoana diamondra dia miankina amin'ny fihetsika simika.